Masaka Gaafataa - Bal'inaan ykn Goolaba
Gabaasawwan gaafataa hunda agarsiisuu fi dhiisuu ifteessa, ykn bu'aa faankishinii walitti qabaa qofa agarsiisa.
Yoo dirreewwan lakkoofsaa gaafata keessa jiraatan qofa fuulli kun argama(mul'ata) innis faankishinoota walitti qabaa akka fayyadamuu dandeenyu nu taasisa.
Bu'aa faankishinoota walitti qabaa qofa agarsiisuuf filadhu.
Dirree lakkoofsaaf faankishinii walitti qabaa fi maqaa dirree saanduqa tarree keessa jiruuf filadhu. Faankishinoota walitti qabaa hanga barbaadde galchuu dandeessa, to'annaa tarree hundaa keessatti tokko.
Faankishinii walitti qabaa
Faankishinii walitti qabaa filadhu.
Maqaa dirree lakkoofsaa filadhu.
To'annaa tarree haaraawaa irratti maxxansa(suta).
To'annaa tarree isa dhumaa haxaawa.
Masaka Gaafataa - Gurmeessuu
This page is: /text/shared/explorer/database/querywizard04.xhp
Title is: Masaka Gaafataa - Bal'inaan ykn Goolaba